Samsung yakavezwa bhinzi-yakafanana neGreen Buds Live tora hunyanzvi hunyanzvi neazvino kugadzirisa
Samsung yakaita splash gore rapfuura payakavhura iyo bhinzi-yakafanana neGreen Buds Live nzeve. Vatarisisa zvakanyanya pane zvinonyaradza, vakauya nechishandiso chinoshamisa kumusoro kwavo - kuridza runyararo kudzima - pamutengo wakaderera wekubvunza we $ 169. Ikozvino, kambani iri kuwedzera mamwe anoshanda madhiri kune yavo arsenal ine nyowani software yekuvandudza. Galaxy Buds Live ikozvino rega iwe uite kuruboshwe… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung yakaita bhinzi yakaita sebhuruu Galaxy Buds Live tora hunyanzvi hunyanzvi neazvino kuvandudzwa
Xiaomi's new audio gear muIndia inosanganisira ANC tambo uye 16W Bluetooth mutauri
Xiaomi nemusi weMuvhuro akawedzera yavo odhiyo portfolio nemaviri matsva ekuwedzera: iyo Mi Neckaband Pro uye Mi Inotakurika Bluetooth Mutauri. Iyo Mi Neckband Pro ndeyekutevera kune maMi Neckband maearphone, ayo akavhurwa muna 2019.Nepo iyo Mi Neckband yakanangana nekuburitsa isingadhuri waya yemawadhi ruzivo neane mwero maficha, Xiaomi iri kuisa iyo Pro musiyano seprimiyamu… [Verenga zvakawanda ...] nezve Xiaomi's new odhiyo giya muIndia inosanganisira ANC tambo uye 16W Bluetooth mutauri
Jabra Elite 85t ongororo: Yakanakisa-kurira TWS nzeve neumwe bakoat
TWS (zvechokwadi isina waya) earbuds chikamu chakawana mukurumbira mumakore achangopfuura uye imhaka yechimiro chavo chakasarudzika, maficha ari nani, uye kugona. Kwakave nemazuva iwayo apo taifanira kushandisa hafu yenguva yedu kusunungura maearphones ane waya kana kuburitsa crock yegoridhe kuti tiwane yakanaka maTWS earbuds. Nepo mamwe eprimiyamu isina waya maBlue earbuds aive… [Verenga zvakawanda ...] nezve Jabra Elite 85t ongororo: Yakanyanya-kurira TWS nzeve nekavha imwe
Sennheiser PXC 550-ii ongorora: Anoshamisa mafambiro emusoro
Munyika yeruzha-kudzima mahedhifoni, kune yakawanda buzz uye kutarisisa kwakatenderedza mhando senge Sony, Beats uye Bose, asi dzimwe nguva iwe unofanirwa kutora nhanho kumashure uye kutarisa kune imwe yechinyakare brand. Munzira dzakawanda, iyo yekutanga PXC 550 yakanzwa yakafanana nemhinduro yaSennheiser kune Bose QC35, uye chizvarwa chechipiri ishanduro yakakwidziridzwa yeiyo. Iko hakuna… [Verenga zvakawanda ...] nezve Sennheiser PXC 550-ii ongororo: Anoshamisa ekufambisa mahedhifoni
Sony WH-CH710N misoro kuongororwa: Noise-kubvisa pane bhajeti
Chimwe chezvinhu zvikuru nezve tekinoroji kufambira mberi ndechekuti, kazhinji, maficha ayo aimbove akachengeterwa ekumusoro-kumagumo uye anodhura zvishandiso anozopedzisira achidonhera pasi kune chinodhura chikamu. Imwe yeiyi tekinoroji munyika yehedhifoni inoshanda (kana inogadzirisa) ruzha-kudzima. Muchikamu chayo cheCH710N chepamusoro pezeve nzeve, Sony yaisa algorithm inotyairwa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Sony WH-CH710N mahedhifoni ongororo: Ruzha-kudzima pabhajeti